Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMargit
Molweni zindwendwe ezithandekayo, istudiyo sethu esipholileyo sisembindini weHermagor, indawo yokumisa ibhasi yokutyibiliza yasimahla imalunga nemizuzu emi-2 ukusuka eGasserplatz. IMillennium Express ikusa eNassfeld malunga nemizuzu esi-7.
Indawo yokupaka iphambi kwendlu. Uyakwazi ukupaka imoto yakho kwindawo yokupaka engaphantsi komhlaba kwimozulu embi.
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle, iitawuli kunye neetawuli zokuhlambela ziyafumaneka, kunye neWiFi
kunye neSAT / TV,
Kummandla wendlu yakho kukho indawo yokutyela yase-ASIA "MEI", indawo yokutyela yase-Italiya "Mari e Monti", i-Bärenwirt-indawo yokutyela enembasa yokutyela, ekupheleni kwesitrato esikhulu nenkonzo ye-pizza oza kuyithatha. Kwi-nightcap uya kufumana i-bistro entle kunye ne-pub.
Kwaye ngokuqinisekileyo ezinye iivenkile ezintle kakhulu. Imarike yamafama ingoMgqibelo eRathausplatz ukusuka ngo-9:00 kusasa ukuya ku-11:00 kusasa. Iqula lokuqubha langaphakathi lingafunyanwa kumgama oyi-13km e-Weißbriach.
Umbuki zindwendwe ngu- Margit
Umamkeli usoloko ekhona ukuze aphendule imibuzo evela kumqeshi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hermagor